N'Golo Kante Oo Cabsi Darteed Looga Fasaxay Tababarka Kooxdiisa Chelsea Iyo Walwalka Ay Abuurayso. - Gool24.Net
N’Golo Kante Oo Cabsi Darteed Looga Fasaxay Tababarka Kooxdiisa Chelsea Iyo Walwalka Ay Abuurayso.
21/05/2020 Mahamoud Batalaale
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea iyo xulka qaranka France ee N’Golo Kante ayaan ka soo xaadirin xerada tababarka ee kooxdiisa Blues maanta oo arbaca ahayd waxaana la ogaaday sababtii aanu tababarka u iman.
N’Golo Kante ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii kooxda Chelsea ee maalintii talaadadii dib ugu soo laabtay xarunta tababarka ee Cobham HQ laakiin iyada oo ay qorshaysnayd in uu maanta dib ugu soo laabto waxa uu seegay tababarkii uu Lampard bixiyay.
Sawirkii maalintii talaadii ee uu Kante tababarka la qaadanayay Chelsea.
War hadda soo baxay ayaa lagu sheegay in N’Golo Kante uu tababarkii maanta oo arbaca ahayd ee kooxdiisa Chelsea uu u seegay sabab la xidhiidha cabsida cudurka karoonaha, waxaana jirta daraasad cabsi wayn ku abuurtay ciyaartoyda madowga ah.
Daraasad uu soo saaray xafiiska xogta iyo statikada qaranka UK ayaa lagu shaaciyay in caabuqa koroona uu halis wayn ku yahay dadka madow, kuwa Asia ka soo jeeda iyo waliba dumarka taas oo keentay in ciyaartoy badan oo kooxaha Premier league ahi ay tababarka diideen.
Xidigo ay ka mid yihiin kabtanka kooxda Watford ee Droy Deeney ayaa si cad u sheegay in ayna tababarka ku soo laaban doonin balse maqnaanshihii Kante ee maanta ayay hadda wararku sheegayaan in uu ku seegay cabsida Fayraskan.
Sida uu daabacay wargayska Daily Mail, ilwareed ayaa shaacisay in Kante uu ka cabsi qabo in halista Koroonaha fayras iyo soo laabshada xili ciyaareedku ay tahay kuwo dareen cabsi ah keenaya.
Laakiin wariyaha caanka ah ee Matt Law oo ka hawl gala wargayska Daily Telegraph ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in sababtii uu Kante maanta ku maqnaa ay ahayd cabsi uu ka qabo karoona.
Matt law ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray: “N’Golo Kante waxaa la siiyay fasax naxariis leh si uu u seego tababarkii Chelsea cabsi uu ka qabo dib u bilaabashada premier League. Ma kala cada waqtiga uu isagu soo laaban doonaa. Kooxdu waxay isaga siisay taageeradooda oo buuxda”.
Inta badan wararku sheego Matt Law ayaa looga bartay in ay yihiin kuwo xaqiiq ah, waana arin muujinaysa ilaa heerka cabsida ciyaartoyda Premier league ay gaadhsiisan tahay iyada oo aan la ogayn waqtiga uu Kante soo laaban karo ee ay xaalada cabsidiisu dagi karto.
Xidiga reer England ee Danny Rose ayaa tilmaamay in soo laabashada kubbada cagta England ee ciyaartoydu ay la mid tahay in iyaga loola dhaqmayo sidii doofaarka ama jiirka daawooyinka lagu tijaabiyo.
Cabsida laga qabo in ciyaartoy badani ay diidaan in ay tababarka yimaadaan ayaa sii kordhaysa waxaana xaalada sii xumayn kara Kante oo ciyaartoy sumcad wayn leh haddii sida warku ku soo baxay ay dhab noqoto in cabsida karoonaha awgii uu tababarkii maanta ku seegay.
Kante waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Afrika ee Mali inkasta oo uu matalo xulka qaranka France, wuxuuna sumcad wayn ku soo yeeshay kubbada cagta intii uu joogay horyaalka Premier League.
Haddii ay hubaal noqoto in Kante uu tababarkii maanta ee kooxdiisa Chelsea uu ku seegay cabsi uu ka qabo in uu qaado fayraska karoona waxay noqon doontaa culays kale oo kooxaha Premier league ku soo kordhay gaar ahaan kooxda Lampard.
Si kastaba ahaatee, waxaa la sugayaa haddii Chelsea ay ka jawaabi doonto maqnaanshihii Kante iyo haddii uu waqtiyada soo socda uu xidiga reer France ku soo laaban doono tababarka kooxdiisa Blues.